सिन्धुपाल्चोक भीषण पहिरो:हेलिकप्टरबाट उद्धार टोली पठाइँदै | त्रिभुवन राजपथमा पहिरो खस्दा एक जना बेपत्ता, चार गाडी पुरिए | अख्तियारमा अधिकांश उजुरी स्थानीय तहका, यस्ता सम्म परेका छन उजुरी | लागुऔषध मुद्दाका आठ वर्ष पछि पक्राउ | मिति २०७७ साल साउन ३० गते शुक्रबार, अगष्ट १४ तारीख हेरौं राशिफल | धुलिखेल अस्पताल क्षेत्र सिल | प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड बिच भेटवाता, कस्तो रह्यो भेट ? | ज्यानमार्ने उद्योगमा पक्राउ परेकालाई छुटाईदिन्छु भनि रकम लिने नुवाकोट शिवपुरीका युवक पक्राउ | नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमणसँगै मृत्युको ग्राफ बढ्दो, सर्तकता अपनाइएन भने ठुलो क्षती व्यहोर्नुपर्ने | सवारी दुर्घटनामा दुईको मृत्यु
— डा. राजेश अहिराज
धेरैपछि मुलुकले स्थिर र सबल सरकार पाएको छ । तर स्थिर सरकारका तरंग अलि बढी नै लहरिएको छ । यो किनभने जुन जोशमा राजा सन्तुष्ट र प्रशासक असन्तुष्ट हुन्छन, त्यसले देशको भलो कहिले हुँदैन, स्थिरता पनि हुँदैन । कालान्तरमा क्षणिक स्थिरता देखिएला तर त्यो स्थायी चाँही हुँदैन ।
वर्तमान दुई तिहाइको सरकारको परिणाम कामले देखाउने कुराहरू हुन् । जनताको भान्छासम्म, जनताको घरआँगनसम्म, मजदुर, किसानको मनसम्म सुधार आएको छैन । दस्तावेजमा, कानुनमा, संविधानमा, अभिव्यक्तिमा, भाषणमा र गोष्ठीमा सुधार आयो तर जनजिविकामा सुधार आएन । असमानताहरूबीच समान प्रतिस्पर्धा गराइयो भने नतिजा पनि असमान नै आउँछ । कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने सीप, अवसर र क्षमतामै विभेद छ भने त्यसबाट समानता आउन सक्दैन ।
सडकमा खाल्डाखुल्डी छ भने नयाँ गाडी भएर पनि त्यसले गति लिन सक्दैन । समाजमा खाल्डाखुल्डी धेरै छन् । त्यसकारण समाजले गति लिन सक्दैन । जुम्लाको एक बालकले काठमाडौंको महंगो विद्यालयमा पढेको बालकसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? जबसम्म स्वास्थ्य र शिक्षा समान हुँदैन तबसम्म देशको विकास हुँदैन ।
जुन देशमा उच्च र तल्लो तहको निर्माण भएर पनि मानिसहरूले राम्रो सेवा सुविधा पाएका छन्, त्यहाँका जनताको जीवनस्तर माथिल्लो हुन्छ । उनीहरू ३ महिना काम गरेर पनि वर्षभर बाँँच्ने आधार पाइरहेका हुन्छन् । विदेश भ्रमण गर्न सक्ने क्षमता आर्जन गरिरहेका हुन्छन् । तर नेपालमा १२ महिना काम गरेर १० महिना मात्रै खान पुग्ने अवस्था छ ।
हाम्रो जस्तो देशमा स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्छ । हाम्रो सरकारले नुन, चामल, खसी, तेल बेच्छ तर स्वास्थ्य र शिक्षा व्यापारीको हातमा पु¥याइदिन्छ । लोककल्याणकारी मुलुकले निगरानी गर्नु पर्ने हो, आफैले व्यापार गर्ने होइन ।
यसअघि नेपालका कानुन र संविधानले मधेशीलाई काम नदिनू, दलितलाई हेला गर्नु, जनजातिलाई अवसर नदिनु भनेका थिएनन् । विभेद लेखेर गरिँदैन । नेपालीको समस्या भनेको नीतिगत होइन, नियतिगत हो । हामी अविकसित भएको होइन, अव्यवस्थित भएका हौं । हाम्रा नेताहरू दल, गुट, टुक्रे समुदाय, जात तर परिवारका लागि चिन्तित छन् । देशका लागि चिन्तित छैनन् ।
नेपालमा गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा राष्ट्रिय पार्टीको अध्यक्ष मै हुँ भन्नेहरूको आफ्नै गाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक कुनै पनि क्षेत्र राम्रो छैन । नेपालमा जनताको लागि होइन जनताको नाममा राजनीति हुन्छ । राष्ट्रिय भनिएका दलहरूको विधानमा देशलाई खण्डित गरिने गरी विधान नै तयार हुन्छन् । संविधानमा ‘नेपाली’ भन्ने मात्रै शब्द प्रयोग हुनु पथ्र्यो । तर जनजाती, खस, आदिवासी, मधेशी, मुस्लिम आदि आदि शब्द प्रयोग भए । दलहरूका विधान त्यस्तै छन् जसले नेपाली–नेपालीबीच फाटो ल्याउने गरी जनताहरूको कित्ताकाट गरिदिएको छ । यी सब पहिचानका अवयव होइनन । नेपालीको पहिचान नेपाली नै हो ।
मान्छेले कसरी सोचेको हुन्छ, त्यसमा भर पर्छ । एक नेपाली भएर सोचिन्छ भने सोच्ने व्यक्ति नेपाली मात्रै हुन्छ । जातको धर्मको रूपमा आफूलाई उसले सोच्दछ भने ऊ त्यही जाती र धर्मको मात्रै हुन्छ । सोच्ने मानिसको स्तरले पनि यी कुराहरूको निर्धारण गर्छ । राष्ट्रिय नेताले क्षेत्रीय सोच राख्ने, जातीय व्यवहार र पारिवारिक आम्दानी गर्ने हुनहुँदैन । जस्तो चित्र हुन्छ, त्यस्तै चरित्र पनि हुनुपर्छ । जस्तो पद छ, त्यस्तै भूमिका हुनुपर्छ । जस्तो मन्तव्य छ, गन्तव्य पनि त्यस्तै हुनु पर्छ । नेताहरूको न धार, न धारणा न धरातल प्रष्ट छ ।
मलाई यो कुरा भन्दा लज्जाबोध हुन्छ कि नेताहरू गुटका लागि छलफलमा जुट्छन् । दलका लागि छलफल गर्छन् र खुलेरै भन्छन् कि अब यो पार्टीलाई बलियो बनाउने हो । कसैले पनि यो देशलाई बलियो बनाउने हो कसैले भन्दैनन् । नेपालमा राष्ट्रवादीहरू धेरै भए । देशभक्त कम । राष्ट्रवाद र देशभक्ति फरक कुरा हो ।
यसअघिका सरकारहरूका कार्यशैली, बिचौलियाहरूको पहुँच, नीजि लाभ, दवाब, भ्रष्टाचार हेर्दा वर्तमान सरकार सफा छ । तर यो सरकारले बोले जति कुरा जनताको आँगनसम्म पुगेको छैन । गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनियो, सिंहदरबार आयो आएन थाहा भएन तर गाउँगाउँमा राजारानी पुगेको भन्न थालिएको छ । जनताको यो गुनासो सहि हो । किनभने जनताले स्वराजको अनुभव गर्न सकेको छैन । जनताले मागेको भन्दा बिल्कुल फरक नेताहरूले दिएका छन् । नेपालका कुनै पनि भूगोलका कुनै पनि जनताले धर्मनिरपेक्ष बनाउ भनेका थिएनन् । यस्तो भताभुंगे संघीयता लागू गर पनि भनेका थिएनन् । जुन नेता र दलहरूले राजसंस्था हटाए, धर्मनिरपेक्षता लादे, जसले संघीयता लादे उनीहरूले चुनावको बेला यस्तो परिवर्तन गर्छौं भनेकै थिएनन् । सुन दिन्छु भनेका थिए लसुन दिए । नेताहरू लिडर होइन, डिलर भए ।
विगतका सरकारसँग तुलना गर्दा वर्तमान सरकार सफा छ भन्दा भन्दै विवादमा पनि फसकेको साँचो हो । किनभने यहाँ फोहोर धेरै छ । फोहोर सफा गर्नेलाई अलिअलि दाग त लागिहाल्छ । यति धेरै बौद्धिक लठैत छन् कि जति राम्रो गर्न खोजे पनि केही मानिसहरू विरोधमै बोल्छन् । कतिपय नेताहरू नियतवस पनि सरकार बदनाम गराउन लागेका छन् । उदाहरणका लागि एक वरिष्ठ अधिवक्ता भइसकेको मान्छेले यहि संविधानको विरोध ग¥यो । पछि त्यही संविधानअन्तर्गतको संसदीय व्यवस्थाको एक समितिको अध्यक्ष पनि भयो । उसले त्यसपछि ड्राइभरको तलब पनि आफैंले खायो । काठमाडौंमै घर भएर पनि घरभाडा बुझ्यो । के उसलाई कानुन र विधिको ज्ञान थिएन होला ? मधेशका राम्रा नेताहरूले पनि सरकारको १२ हजार खाइदिएर पनि सरकारको बदनाम गरिदिएका छन् ।
वर्तमान सरकारले सुधारका प्रयास गरेको छ । पहिलेजस्तो पैसा दिएर सरूवा हुँदैन, पैसा दिएर प्रहरीमा जागिर पाइँदैन, बिचौलियाहरूले सरूवा, बढुवाका लागि क्रियाशील भएको अवस्था पनि छैन । तर पनि यो सरकारले बोलेका जति काम गर्न सकेको छैन ।
सञ्चारमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुबैले बोलेर होइन काम गरेर सबै प्रश्नहरूको व्यवहारिक जवाफ दिनुपर्छ । बोल्न कम गर्नुपर्छ । जति पनि मानिसहरूले प्रश्न गर्छन्, त्यसको जवाफ शब्दमा होइन, कामले दिनु पर्छ । बोल्ने काम प्रवक्ता, आलोचक, प्रतिपक्षलाई दिनुपर्छ ।
जसले पिए नै नियुक्त गरेको छैन, उसलाई पनि पिएको पैसा निकासा गर्ने सरकारी कर्मचारी कस्ता हुन् ? जसले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा काठमाडौंमा घर छ भनेर स्पष्ट लेखेको छ, उसैलाई घरभाडा हालिदिने कर्मचारी कस्ता हुन् ? नेता मात्रै होइनन, संरचना पनि दोषी देखिएको छ । नेता हुँदैमा सबै कानुनको ज्ञाता हुँदैनन् ।
नेपालका प्रथम गणतन्त्रवादी व्यक्ति ज्ञानेन्द्र नै हुन् । जसले कुनै पनि नागरिकको हत्या नगरी आफ्नो सर्वस्व सुम्पेर हिँडे । १७ हजार मान्छे मारेर माओवादी स्थापित भए । सयौं मान्छे मारेर उपेन्द्र यादव स्थापित भए । कांँग्रेस कम्युनिष्ट सबैको पृष्ठभूमि जनता मार्ने नै छ । तर पूर्वराजाले जनता मार्नुभन्दा गद्दि नै छाडिदिए । यसले उनमा नागरिक तहमा भएको प्रेम देखाउँछ । जनताले यो कुरा बुझ्दै गएका छन् ।
कांग्रेस हिन्दुत्वको मुद्दामा फर्किए हित नै हुनेछ । कांग्रेसको एकमात्रै आधार क्षेत्र मधेशमा बाँकी छ । मधेशमा अधिकांश मानिस हिन्दू छन् । हिन्दूको कुरा गर्नुको अर्थ इसाईको विरोध गर्नु होइन । अरू धर्मको अपमान गर्नु पनि होइन । तर राप्रपा जस्तो पनि गर्नु हुँदैन । राप्रपाले हिन्दुत्वलाई ‘ताक परे तिवारी नत्र गोतामे’का रूपमा प्रयोग गरेको हो । त्यसरी चाहिँ कांग्रेसले गर्नु हुँदैन । कांग्रेसले हिन्दुत्व बोक्यो भने त्यो पार्टी समाप्त हुने भन्ने प्रचण्डको अभिव्यक्ति विचलनको संकेत हो ।
केन्द्रमा मधेशका मुद्दा भइदिएको भए क्षेत्रीय दल बन्ने नै थिएनन् । जति पनि छन् आफूलाई मधेशवादी भन्नेहरू छन्, उनीहरू मधेशको नेतृत्व गर्दैनन, प्रतिनिधित्व मात्रै गर्छन् । उनीहरू अवसरवादी राजनीतिक बिचौलिया मात्रै हुन् । त्यसैले उनीहरूबाट न मधेशको न त देशको कसैको हित हुन्छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
आलेखः मनको शल्यक्रिया : विपश्यना ध्यान
आलेखः महामारीबाट बाहिरिँदै गरेको बेलायतबाट के सिक्ने ?
विशेष लेख : जो दिनहुँ मारिन्छन् तर, राज्य सुन्दैन
स्थानिय तहमा दिगो विकासको सोच र आगामी नीति तथा कार्यक्रम
जनता सरकार र साम्राज्यवाद
कोरोनाले मानिसमा रोग भन्दा पनि बढि मनोबैज्ञानीक असर परेको छ :बिष्ट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बिष्ट
सिमा अतिक्रमण र यसका समस्या
विकल्प छैन, गर या मर !
भूकम्पले घरवारविहीन हुँदा दरबार जोडनेहरु कोरोनाको विपत्तिको बेलामा समाजसेवाको खेती गदै
विशेष लेख- महामारीको इतिहास : आदिम कालदेखि आधुनिक युगसम्म
नेपालका संसदीय शासकहरूबाट परिवर्तन असम्भब, नयाँ जनवादी गणतन्त्र ल्याउनु अपरिहार्य छ
सांसद डा. यादबका तीन ‘अपहरण्कारी’ को नालिबेली
आलेख : घर फर्किने दिनको पर्खाइमा सीमापारिका नेपाली
गरिब जनताहरु रोगलाई होइन भोकलाई जित्न नसकेर गाँउ र्फकदै छन् : थापा
लकडाउन खुकुलो पार्दै जाने होइन,अन्त्य नै गर्ने हो तर त्योभन्दा पहिला कोरोनाको अन्त्य हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
हात धुन पानी उपलब्ध हुनुप¥यो : विज्ञ
आलेख : चिया टिप्न पाए, खुशी भए किसान
विशेष अन्तवार्ता– कोरोना जोखिमसँगै सङ्घीयताको औचित्य पुष्टि भयो : गण्डकी मुख्यमन्त्री गुरुङ
व्यक्ति भन्दा माथि उठेर सिङ्गो मानव जातिका लागि सोच्ने बेला हो यो - तेजेन्द्र शर्मा पौडेल
कालोबजारीले जनता आक्रान्त भए, सानाठुला नभनी कारबाही गर सरकार- शिव अधिकारी (अविरल)
कोरोनालाई मजाक नबनाऔं,केहि दिन धैर्यता लिऔं सब ठिक हुन्छ : शिव अधिकारी (अबिरल)
सरकारका दुई वर्ष : मुर्छित सपनाहरु यथार्थमा रुपान्तरित हुँदै
दुर्घटनापछि उजाडिएको जिन्दगी
भ्रमण वर्षमा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु
आलेख : ‘मानव अधिकारप्रतिको प्रतिवद्धता मात्रै आउँछ, परिपालना हुँदैन’
किसानमाथि चरितार्थ – ‘दैबो दुर्बल घातक’
तारकेश्वरमा काँग्रेसलाई शक्तिशाली बनाउने छु : तामाङ
बोराभित्रको बास !
राजा महेन्द्रले आफ्नो सत्ता जोगाउनकै निम्ति कालापानीमा भारतीय सेना राख्न दिएका हुन्
राजनीतिको छत्रछाँयामा मात्र रमाउनेले एनआरएनएको नेतृत्व गर्न सक्दैन : नेपाली समाज मकाउका अध्यक्ष दोर्जे
मध्यदशैँमा महरामा पर्न गएको मार..
के विदेशीएका नेपालीहरुले बोल्नै नपाउने हो त ?
कारागारमा सिसिटिभीदेखि विद्युतीय हाजिरीसम्म
चाड नजिकिएपछि खर्च जुटाउन भारततिर
आलेख ः स्थानीय तहसँग विपद् व्यवस्थापन योजना छैन
एशियन पेन्टसको अवैध धन्दा, उद्योग बिरुद्ध अदालतमा मुद्धा दायर
माटाका भाँडामा लुकेको अन्र्तकथा
आलेख ः रातो मछिन्द्रनाथ जात्राका प्रचलन कायमै राख्न जोड
आलेख ः भद्रपुर नाकामा सामान ओसार्न राँगागाडी !
आलेख ः भोको पेट विद्यालय जान्छन् बालबालिका
गण्डकी प्रदेशका जनप्रतिनिधि महिलाको संक्षिप्त जीवनी विमोचन
‘जीवनमा पीडा भए पनि बोल्न पाउने व्यवस्था आउनु उपलब्धि’
आलेख ः गणतन्त्रले दियो स्वतन्त्रता
मदन भन्डारी र जीवराज आश्रीत दूर्घटना र झुठको खेती
सीके राउत परिचालित त थिएनन् ?
सहिद र बलिदानी मूल्य
२४ औँ जनयुद्ध दिवस र एकीकृत जनक्रान्ति
प्रचण्ड र ओलीभन्दा ज्ञानेन्द्र असल (भाग दुई)
समायोजनमा फँसेको कर्मचारीतन्त्र
कांग्रेस जोगाउने कि गुट ?
जुधेर होइन, मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ
लैंगिक हिंसा न्युनीकरणमा मिडियाको भूमिका
बलात्कारका घटना र त्यसका कारण
सङ्घर्षका ति पाईला , न थाक्ने एक नारी हिरामाया घिसिङ तामाङ
मापदण्ड बिपरीतका होमस्टेहरु हाेसानकाे निगरानीमा
विकासमा जनसहभागिता ः कतै शून्य, कतै छ महिनासम्म श्रमदान
आलेख ः पुलका खाँबा हेर्दै नदीमा हेलिँदाको आधा दशक
लोकतान्त्रिक मान्यतामा गम्भीर घात
डा गोविन्द केसीको अनसन र मार्सी चामलको भात
मधेशी दलको प्राथमिकता मुद्दा कि सत्ता ? – संगीता रेग्मी
मोदी, ओली र भट्टराईलाई लुईटेल स्कूलको खुला पत्र
स्वच्छ कि स्वच्छाचारी पत्रकारिता
खरेल यानी "चेन अफ कमाण्ड"
कर्मशील श्रीकृष्णप्रसाद खनालप्रति पैतालिस दिनको पावन तिथिमा हार्दिक श्रद्धाञ्जलि
एमाले–माओवादी केन्द्रको एकता दुईवटा बैक मर्ज भए जस्तो हो ः डा. बाबुराम भट्टराई
अमेरिकामा दुख नपाउन यि ७ चिज हरदम हेक्का राख्नुहोला
पालैपालो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुने गरि एकता गर्ने हो भने नयाँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई अहिलेनै लालसलाम गरेर बिदा गरिदिए हुन्छ ः नेपाल
नेविसंघको पुरानो साख जोगाउनु आजको अवश्यकता
शासक परिवर्तन हुनपर्छ शासन हैन
बिरासतको लडाईंमा पत्रकार जगत
जिम्मेवार हुन सिक्ने हो कि !
समय फेरियो जनता उस्तै
नेपालको महाभूकम्प पश्चात राष्ट्रपति ओबामाले टिपिएस सुविधा दिएर गरेका मानविय कार्यको विरुद्धमा कोहि पनि जानु राम्रो होइन ः क्राउली, अमेरीकी संसद
बिपी रोएको त्यो दिन
अमेरिकन लाइफ, क्रेडीटको महत्व , फ्रडको आतङ्क र बच्ने उपायहरु कति वर्ष लाग्छ त क्रेडिट बन्न अमेरिकामा? विशेष चिरफार
वामपन्थी गठबन्धनलाई स्वीकृति
लत्रिदै गैरहेको एन आर एन, कमजोर लिडरसिप र अब्यबसायिक एबम अपार्दशि चौतारी
यसकारण चुक्नु पर्‍यो नेपाली कांग्रेस
निर्वाचनमा दलीय व्यवहार र परिणाम
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४, किन खस्कियो कांग्रेस ?
अब राष्ट्रवादीहरुले जित्ने बेला आएको छ ः खडका